Virgo နှင့်ကုံ: ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အသုံးပြုပုံများ
ဘာသာတရား & ဝိညာဉ်ရေး မတ်ေတာသညျ
by Molly ခန်းမ
Virgo နှင့်ကုံ quirks စာရေးနှင့်အတူအေးမြဇာတ်ကောင်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာပွဲတစ်ပွဲအတွက်ရာသီခွင်၏အရှိဆုံးအထူးသဖြင့်ဆိုင်းဘုတ်များပါပဲ။
ထိုကာလကိုကျော်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အများကြီးမရှိမဆိုလိုပါသော်လည်းနှစ်ဦးစလုံးကိုမိမိတို့အကြောင်းကိုကိစ္စ-of တကယ်တော့ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီမှာတစ်ဦးယဉ်ကျေးက start င်နှင့်အခြားဓာတုဗေဒ (အရှိမယ့်အခါ, အကယ်. ကလေးမွေးဖွားဇယား ), သငျသညျဆုရှင်ရှိနိုငျတယျ။
Virgo ရှေ့လှဲချနိုင်မှ likes, သူတို့ကစားသောက်ဆိုင်ဘယ်လောက်ဝေးလမ်းလျှောက်, ရပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာစိတ်ကူး, etc airy Aquarians ယင်ကောင်အပေါ်အမှုတို့ကိုပြုလို, နှင့်လေတိုက်နှုန်း shift လျှင်အစီအစဉ်များကိုပြောင်းပေးပါ။
ကုံအဆိုပါသံသယကိုပယ်မှုတ်ဖို့ရုတ်တရက်တိုက်တွန်းထားပြီးတဲ့အခါမှာ Virgo တစ်ဦးဆိုတဲ့ funk သို့ get ပါသလား ကုံ '' အပြောင်းအလဲမြန်အပြုအမူအတွက်ထုတ်ပါဘူး Virgo များ၏အမှောင်ဘေးထွက်? Virgo များ၏တင်းကျပ်ပြီးပြည့်စုံသူကိုဖကျြဆီးပုန်ကန်သောထုတ်ဆောင်ကြဉ်းပါသလား ကုံ၏အမှောင်ဘေးထွက်?
မည်သည့်ဒုက္ခအချို့အံ့သြလောက်အောင်ဝတ္ထုအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူပုံမှန်အတိုင်း groove scramble ဖို့ Waterbearer နာမငြိမ်အတူစတင်ဘယ်မှာဒီမှာပါပဲ။ Virgo သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီတော့အထိခိုက်မခံဖြစ်ခြင်း, တစ်စီမံဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစျသိမျ့ဇုန်ကျော်လွန်တွန်းဖွင့်သည့်အခါ Virgo များ၏ဦးနှောက်အာရုံကြောဘက်ထွက်လာပါတယ်။
မေတ္တာတော်၌တည် Virgo , လက်တွေ့ကျတဲ့အကဲနှင့်အာရုံငါးပါးဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာတော်၌တည်ကုံ , စမ်းသပ်ပုန်ကန်တတ်သောနှင့်တွေးခေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတွဲဖက်မှုစိန်ခေါ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၏ဘွဲ့များအတွက်အပိုရမှတ်ရရှိသွားတဲ့ဒါကြောင့်ပါပဲ။ သို့သော်တစ်ဦး Starting Point သို့ဖြစ်ကြောင်းတူ၏အရိပ်ရှိပါသည်။ အမြဲသကဲ့သို့, အပြည့်အဝဇယားမှာကြည့်ရှုပါ။ အံ့သြဖွယ်ရှိပါရဲ့ဆိုပါက ချစ်ခြင်းမေတ္တာဓာတုဗေဒ , သင်ဖြစ်ကောင်းကစားအခြားအချက်များရရှိပါသည်။
တစ်ဦးချင်းစီစားပွဲမှထင်မြင်ယူဆနေတဲ့သန့်စင်ပြီးအလားအလာများနှင့်အစုတတ်၏။ နှစ်ဦးစလုံးအတန်ငယ်စိတ်ခံစားမှု detach လုပ်လိုက်သောနှင့် PDA ၏ဆိုးဆိုးရွားရွားဆုမွန်ကောင်းမဟုတ်နေကြသည်။ သူတို့ဟာသဘောအရအများအပြားအကြောင်းအရာများကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်။
ကုံသစ်ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ရှာနေအဖြစ်ကိုဖြတ်ပြီးလာနှင့် Virgo အဆိုပါကြိုးစားခဲ့နဲ့စစ်မှန်တဲ့နှင့်အတူကပ်လျက်သော်လည်းသူတို့က, လူမှုရေးကိစ္စများဆွေးနွေးခြင်းအတွက် shared အကျိုးစီးပွားကိုရှာပါ။ နှစ်ဦးစလုံးဇွဲထက်သန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်တက်သုတ်သင်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းတစ်အင်အားစုဖြစ်ပေမယ့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
ချိန်းတွေ့တဲ့အခါ, Aquarian Virgo လေးစားဖွယ်ခံစားရစေသည်သောတိလမ်းအတွက်တက်ပြသထားတယ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ Virgo တဦးတည်းဆက်ဆံရေး၏အထူးသဖြင့်ကျိန်းဝပ်ရန် likes နေစဉ် Waterbearer တစ်ဝေး-ရောက်ရှိလမ်းအတွက်ဖော်ရွေသည်။ Virgo ရဲ့မသေချာမရေရာစိတ်ရင်းဆည်းကပ်ပိုမိုဆိုင်းဘုတ်များမပါဘဲပေါက်နေသည်။
အဆိုပါ Aquarian ကတိကဝတ်သို့မဟုတ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သို့သော့ခတ်ခံရဖို့ကိုကြိုက်မထားဘူး။ သို့သော်ဤအရာနှစ်ခု Virgo အနားယူနှင့်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်၎င်းတို့၏ပိုမိုနက်ရှိုင်းတည်ထုတ်ဖေါ်ဖို့စတင်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုပါ။ အဆိုပါ အကယ်. Virgo အစွန်းပေါ်နှင့်ဖရိုဖရဲစွမ်းအင်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ရေးအပေါ်ထား, သူတို့ပျောက်ဆွဲမစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ထွက်အလုပ်လုပ်ကဤစုံတွဲတစ်အလယ်ပိုင်းဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆိတ်ကွယ်ရာအချိန်ယူနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးအရိပ်လက္ခဏာကသူတို့ရဲ့အတူတကွနေထိုင်နိုင်ရန်ဟန်ချက်ဖြစ်စေသောတစ်ဦး loner ခြမ်းရှိသည်။
ကုံလူသိများမညီကြောင်းကိုချိုးဖျက်ဖို့ likes နှင့် Virgo (ကစိုးမိုးရေးအဖြစ်) ကိုသိစုံလင်မှကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ကုံကိုယ်ထိလက်ရောက်အေးမြသည်နှင့်အိပ်ခန်းထဲမှာစမ်းသပ်ဖို့ likes ။ Virgo နွေးများနှင့်ဖြစ်သောကြောင့်မြေသားဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်မကြာခဏလည်း kinky ဘာမှကျော်ရိုးရှင်းပြီးရိုးရာကြိုက်နှစ်သက်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးဆက်ဆံရေးထွက်ကစားမယ့်ဇာတ်ဆောင်တဦးတည်းလုပ်တက်အဆုံးသတ်နိုင်သည့်, (ခဲယဉ်းဖတ်ပါရန်) inscrutable နိုင်ပါတယ် '' မိမိတို့ခေါင်းပေါ်၌တည်၏။ '' ၎င်း၏လက်အပေါ်နှလုံးကျီကိုမ!
အိမ်မှာ, Virgo အဆိုပါထိုးပြီးနဖူးနှင့်အတူသပ်ရပ်ခြင်းနှင့်တာဝန်ရှိတဦးတည်းဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
Aquarians စိတ်ကူးများ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကမ်ဘာပျေါတှငျဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်မကြာခဏသာမန်တာဝန်များကိုလျှောပါစေရ။ ဒီစုံတွဲနှင့်အတူ, Virgo အဆိုပါချင်နေကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍသို့ကျရောက်လျက်, ဝေဖန်မှုများညာဘက်အပူအပင်ကင်းပြီးကုံရည်ရွယ်သည်။ အဆိုပါ Waterbearer Virgo Micro-စီမံခန့်ခွဲသူတို့၏ဘဝကိုဖို့ကြိုးစားနေရဲ့တစ်ဦး downer ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။
အဲဒီနှစျခုအရိပ်လက္ခဏာမိန့် (Virgo) နှင့် Chaos (ကုံ) ၏လက်မှတ်သယ်ဆောင်နှင့်ဆက်ဆံရေးအစွန်းရောက်ဖြစ်စေရန်ရိုင်းတျအပွောငျးအလဲအားဖြင့်မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။
သူတို့အညီနေတဲ့အခါ, Virgo ရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ရူပါရုံ airy ကူညီ ကုံ ဆင်းမြေကြီးပေါ်ကသူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ ပိုင်းခြားသိမြင်ဘို့ Virgo ရဲ့လက်ဆောင် Waterbearer တစ်ဦးကျိုးနပ်ရည်မှန်းချက်အပေါ်ထဲမှာ hone ကူညီခြင်းနှင့်ခြေလှမ်းများကိုထုတ်ချနိုင်။ ကုံ Virgo ကြီးတွေရုပ်ပုံကိုပြသပြီးလမ်းကြောင်းကျဉ်းလိုက်ရာမှသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်။ ဤသည်သာခဏလျှင်ကုံတစ် loftier ရှုထောင့်ကနေအမှုအရာကိုမွငျလြှငျသို့ Virgo ဆွဲယူပုံဖြစ်ပါသည်။
ကုံမှ Virgo ရဲ့ဆုကြေးဇူးကိုသူတို့ကို '' ၎င်းတို့၏အလောင်းများကိုအတွက်ဖြစ် '' နှင့်အာရုံ၏သိမ်မွေ့ပျော်ရွှင်မှုကိုသိကူညီပေးနေသည်။ ကုံပျံဝဲနိုင်ပြီး, Virgo တစ်ခုကျောက်ဆူးရှိရဲ့ခံစားရသည့်အခါ, ဒီဆက်ဆံရေးဟာတစ်ဦးအဆင်မပြေပွဲတက်နေစဉ်, အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ထောက်: erudite; အနည်းဆုံးနှင့်သန့်ရှင်းသောနေရာများမှရေးဆွဲ; သနားကြင်နာတတ်တဲ့, လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အန္တရာယ်အရှိဆုံး၏ချန်ပီယံပါ၏ အမြင်; သဘာဝအ; အရေအတွက်ကျော်အရည်အသွေးကို; ကတိသစ္စာပြု။
အားနည်းချက်တွေ: ခေါင်းမာ; လျှို့ဝှက်ချက်ဘဝတွေကို; compartmentalizing; ဝေးလံခေါင်သီ; အအေး; သစ္စာမဲ့။
ဒြပ်စင်များနှင့်အရည်အသွေး Mutable ကမ္ဘာမြေ (Virgo) နှင့် Fixed Air ကို (ကုံ)
Taurus နဲ့ Pisces မတ်ေတာသအသုံးပြုပုံများ
ရာသီခွင်လိုက်ဖက် - မေတ္တာတော်၌တည်ကုံ
ရာသီခွင်လိုက်ဖက် - မေတ္တာတော်၌တည် Taurus
ရာသီခွင်လိုက်ဖက် - မေတ္တာတော်၌တည် Virgo
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အသုံးပြုပုံများ - venus Aries နှင့်အတူ venus လီယို
ယင်းရာသီခွင်တွင် အခြေခံ. ချိန်းတွေ့သိကောင်းစရာများ
Gemini မတ်ေတာသအသုံးပြုပုံများအတွက် venus
တစ်ဦး Taurus အမျိုးသမီး၏နှလုံးအနိုင်ရမည်ဟုလုပ်နည်း
ကင်ဆာနှင့် Pisces မတ်ေတာသအသုံးပြုပုံများ
Virgo နှင့် Pisces မတ်ေတာသအသုံးပြုပုံများ
အသုံးပြုပုံများ - venus လီယိုနှင့်အတူ venus Taurus
Warren Wilson ကကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Libra, ကုံနှင့် Gemini လေ Element တွေကို Are
အဆိုပါ SAT စာမေးပွဲဘယ်အချိန်ပါလဲ?
Microraptor, အလေး-Wing ဒိုင်နိုဆောအကြောင်းအချက်အလက်
130-တစ်နှစ်တာအဘိဓါန် Old Lady Liberty သင့်အများစုမှာမီးရှို့ခံရသောမေးခွန်းများအဖြေများ
"ဒီ Namesake" - Jhumpa Lahiri အားဖြင့် Novell
အဆိုပါဂတ်စ် Tank ထဲမှာသကြားတကယ်ပဲသင့် Engine ကိုသတ်နိုင်ပါသလား?
Gloucester ၏ Isabella
"ပတေရုနှင့် Wolf က" ဖြင့်အလေ့အကျင့်စာရွက်စာတမ်း Differentiation
အဆိုပါ Mfecane တောင်အာဖရိကတှငျအဘယျခဲ့သလော
အဘယ်ကြောင့် Molality မယ့်အစားအံ၏သုံးထားသလဲ?